Izisekelo eziyisisekelo ze-Brain: uhlelo lokuvuza luqhuba ukuziphatha kwethu Isisekelo Somvuzo
Ikhaya Ama-Brain Basics Umvuzo System
Ukuze siqonde ukuthi kungani siqhutshwa ukudla okuhlwabusayo, ukuthinta ngothando, isifiso sobulili, utshwala, i-heroin, izithombe zobulili ezingcolile, ushokoledi, ukugembula, ezokuxhumana nabantu noma ezitolo ze-intanethi, sidinga ukwazi ngesistimu yokuvuza.
The uhlelo lokuvuza ingenye yezinhlelo ezibaluleke kakhulu ebuchosheni. Kushukumisela isimilo sethu ezintweni ezithokozisayo njengokudla, ucansi, utshwala, njll. Futhi kusikhiphela kude nokubuhlungu (ukungqubuzana, umsebenzi wesikole, njll) okudinga amandla amaningi noma umzamo. Yilapho sizwa khona imizwa futhi sicubungula leyo mizwa ukuqala noma ukumisa isenzo. Iqukethe iqembu lezakhiwo zobuchopho engxenyeni yobuchopho. Bakala ukuthi bayakuphinda noma cha ukuphinda benze futhi bakhe umkhuba. Umvuzo uyisikhuthazi esishayela isifiso sokushintsha indlela yokuziphatha. Imiklomelo ngokuvamile isebenza njengabaqinisi. Lokho wukuthi, zisenza siphinde isimilo esibona (ngokungazi) njengokulungele ukusinda kwethu, noma kungenjalo. Ubumnandi bungumvuzo ongcono noma isikhuthazo kunobuhlungu bokuziphatha okukhuthaza. Isanqante ingcono kunenduku njll.
Ephakathi nendawo yohlelo lokuvuza yiyona striatum. Kuyisifunda sobuchopho esikhiqiza imizwa yomvuzo noma injabulo. Ngokusebenza, i-striatum ixhumanisa izici eziningi zokucabanga ezisisiza ukuthi sithathe isinqumo. Lokhu kufaka phakathi ukunyakaza nokuhlela isenzo, ukugqugquzela, ukuqinisa, nokubona umvuzo. Yilapho ubuchopho bukala khona inani le-stimulus ku-nanosecond, ithumela amasignali okuthi 'hamba ngayo' noma 'uhlale kude'. Le ngxenye yobuchopho ishintsha ngokuphawuleka kakhulu njengomphumela wokuziphatha okuluthayo noma ukuphazamiseka kwezidakamizwa. Imikhuba eye yaba imigqa ejulile iyindlela yokufunda 'ye-pathological', lokho ukufunda okungalawuleki.
Lesi yisikhathi esifushane se-TED enkulumweni Umculi Wokuthakazelisa.
Iyini indima ye-dopamine? I-Dopamine iyi-neurochemical ebangela umsebenzi ebuchosheni. Yilokho uhlelo lomvuzo olusebenza kukho. Inemisebenzi ehlukahlukene. I-Dopamine yi-'go-get-it 'ye-neurochemical esishayela ekuvuseleleni noma ekuzuziseni nasekuziphatheni esikudingayo ukuze sisinde. Izibonelo ukudla, ubulili, ukubopha, ukugwema ubuhlungu njll. Futhi kuyisibonakaliso esisenza sinyakaze. Isibonelo, abantu abanesifo sikaParkinson's abacubunguli i-dopamine eyanele. Lokhu kukhombisa njengokunyakaza okungahambi kahle. Imvamisa ephindaphindwayo ye-dopamine 'eqinisa' izindlela ze-neural ukusenza sifune ukuphinda isenzo. Kuyisici esibalulekile ukuthi sifunde kanjani noma yini.
Kulinganiselwa ngokucophelela ebuchosheni. Umbono omkhulu ngendima ye-dopamine yi- ukugqugquzela inkolelo. Imayelana nokufuna, hhayi ukuthanda. Umuzwa wenjabulo uqobo uvela kuma-opioid emvelo ebuchosheni akhiqiza umuzwa wenjabulo noma ophakeme. I-Dopamine ne-opioid isebenza ngokubambisana. Abantu abane-schizophrenia bathambekele ekukhiqizweni ngokweqile kwe-dopamine futhi lokhu kungaholela ezivunguvungwini zengqondo nemizwelo eyeqile. Cabanga ngeGoldilocks. Ibhalansi. Ukuzitika ngokudla, utshwala, izidakamizwa, i-porn njll kuqinisa lezo zindlela futhi kungaholela ekubeni umlutha kwezinye.
Inani le-dopamine elikhishwe ubuchopho ngaphambi kokuziphatha lilingana nokukwazi kwalo ukuhlinzeka injabulo. Uma sithola injabulo ngento noma umsebenzi, imemori eyakhiwe isho ukuthi silindele ukuthi iyophinde ibe mnandi futhi. Uma isikhuthazo siphula ukulindela kwethu- siyinto ejabulisayo noma engathandeki kakhulu - sizokhiqiza i-dopamine engaphansi kakhulu esikhathini esizayo lapho sihlangana khona nesisusa. Izidakamizwa ziqeda uhlelo lokuvuza futhi zikhiqize amazinga aphezulu we-dopamine nama-opioids ekuqaleni. Ngemuva kwesikhathi ubuchopho bujwayele ukuvuselela, ngakho-ke kudinga ukuthuthukiswa kwe-dopamine ukuze uthole phezulu. Ngezidakamizwa, umsebenzisi udinga okufanayo, kepha nge-porn njengendlela yokuvuselela, ubuchopho badinga ukusha, okuhlukile futhi okwesabekayo noma okumangazayo ukuthola eliphezulu.
Umsebenzisi uhlala ejaha inkumbulo nokuhlangenwe nakho kwephezulu lokuqala lokuthokoza, kepha imvamisa kugcina kudumazekile. Angikwazi ukuthola u… .kweneliseka. Umsebenzisi futhi, ngemuva kwesikhathi, 'angadinga' i-porn noma utshwala noma usikilidi, ukuze ahlale ikhanda lobuhlungu obubangelwa yi-dopamine ephansi nezimpawu zokuhoxa ezicindezelayo. Ngakho-ke umjikelezo ononya wokuncika. Kumuntu onokusetshenziswa kwezidakamizwa noma ukuthembela ekuziphatheni, 'isifiso' sokusisebenzisa, esibangelwe ukwehla kwamazinga e-dopamine, singazizwa njengesidingo sokusinda 'sempilo noma sokufa' futhi siholele ekuthathweni kwezinqumo ezimbi kakhulu ukumisa ubuhlungu.
Source Main of Dopamine
Umthombo oyinhloko we-dopamine kule ndawo maphakathi nobuchopho (i-striatum) ikhiqizwa endaweni ye-ventral tegmental (VTA). Ngemuva kwalokho iya kwi-nucleus accumbens (NAcc), isikhungo somvuzo, ngokuphendula umbono / umbono / ukulindelwa komvuzo, kulayishwa inhlamvu elungele ukusebenza. Isenzo esilandelayo - umsebenzi wezimoto / wokunyakaza, owenziwe yisiginali ejabulisayo 'hamba uyithole,' noma isiginali evimbelayo, efana 'nokuma', izonqunywa yisiginali esivela ku-prefrontal cortex uma selucubungule imininingwane. Lapho kune-dopamine engaphezulu esikhungweni semivuzo, kulapho umfutho ubonwa njengomvuzo. Abantu abanezinkinga zokuziphatha ezingalawuleki, noma imilutha, bakhiqiza isignali ebuthakathaka kakhulu evela ku-prefrontal cortex ukuvimbela isifiso noma isenzo sokujaha.
<< Ama-Neurochemicals Ubuchopho Bentsha >>